Imbali yePhosphorus, Properties, kunye neMisebenzi
I-Phosphorus iyinxalenye ye-15 kwitheyibhile yexesha , kunye nesimboli sophawu P. Ngenxa yokuba i-chemicals esebenzayo, i-phosphorus ayifumaneki ikhululekile kwimvelo, kodwa uhlangabezana nalo mzimba kwiimveliso kunye nasemzimbeni wakho. Nazi izinto ezi-10 ezithakazelisayo malunga ne-phosphorus:
I-Phosphorus yafunyanwa ngo-1669 nguHennig Brand eJamani. I-Brand isolated phosphorus ephuma kumchamo. Ukufumanisa kwenza uBrith umntu wokuqala ukuba athole into entsha . Ezinye izinto, ezifana negolide kunye nentsimbi zaziwa, kodwa akukho mntu othile owazifumanayo.
Umthamo ubizwa ngokuba yinto entsha "umlilo obandayo" kuba wawukhanya ebumnyameni. Igama lento livela kwigama lesiGrike elithi phosphoros , elithetha "umlethi wokukhanya". Ifom ye-phosphorus Brand eyayifumene yayingu-white phosphorus, ephendula nge-oxygen emoyeni ukuvelisa ukukhanya okuluhlaza okomhlaza. Nangona usenokucinga ukuba ukukhanya kuya kuba yi-phosphorescence, i-phosphorus i-chemiluminescent kwaye ingekho i-phosphorescent. Kuphela i- allotrope emhlophe okanye ifom ye-phosphorus iyavutha ebumnyameni.
Ezinye iindinyana zibhekisela kwi-phosphorus ngokuthi "i-Element's Element" ngenxa yokukhanya kwayo, ukuthambekela kokugqithisa umlilo, kwaye ngenxa yokuba yinto eyaziwayo ye-13.
Njengezinye iingu-nonmetals , i-phosphorus ecocekileyo ithatha iifom ezahlukileyo. Kukho ubuncinane ama-allotropes ama-phosphorus amahlanu . Ukongeza kwiphosphorus emhlophe, kukho ibomvu, i-violet kunye ne-phosphorus emnyama. Kwiimeko eziqhelekileyo, i-phosphorus ebomvu neyomhlophe yizona ndlela eziqhelekileyo.
Ngoxa iipropphophorus zixhomekeke kwi-allotrope, zikwabelana ngeempawu eziqhelekileyo ezingafaniyo. I-Phosphorus ngumqhubi ompofu weshushu kunye nombane, ngaphandle kwe-phosphorus emnyama. Yomeleleyo kwindawo yokushisa. Ifomu emhlophe (ngezinye iinkhathi kuthiwa i-yellow phosphorus) ifana ne-wax, iifom ebomvu ne-violet zingama-nonlistalline solids, ngelixa i-allotrope emnyama ifana ne-graphite iphambili yepencil. Into ecocekileyo iyasebenza, kangangokuthi ifomu elimhlophe liya kutshaya ngokukhawuleza emoyeni. I-Phosphorus inesimo se-oxidation ye +3 okanye +5.
I-Phosphorus ibalulekile kwizinto eziphilayo . Kukho malunga ne-750 grams ye-phosphorus kumntu omdala omdala. Emzimbeni womntu, kufumaneka kwi-DNA, amathambo, kunye ne-ion esetyenziselwa ukuqhaqhazeka kwemisipha kunye nokuqhutyelwa kwentsholongwane. Noko ke, i-phosphorus echanekileyo, ingaba yingozi. I-phosphorus emhlophe, ngokukodwa, idibene nemiphumo emibi yempilo. Xa umxube wenziwa ngokusebenzisa i-phosphorus emhlophe, isifo esibizwa ngokuba ngumhlathi we-phossy sabangela ukuguqulwa nokufa. Ukuqhagamshelana ne-phosphorus emhlophe kungabangela ukutshiswa kweekhemikhali. I-phosphorus ebomvu iyindawo ekhuselekileyo kwaye ithathwa njengento engeyona inetyhefu.
I-phosphorus yendalo iqukethe isotope esisigxina, i-phosphorus-31. Ubuncinane ubunama-isotop 23 e-element ayaziwa.
Ukusetyenziswa okuphambili kwe-phosphorus kukuvelisa umquba. Isalathiso sisetyenziswe kwiirharenti, iimidlalo zokukhusela, idiode zokukhanya, kunye nemveliso yensimbi. Iifossphates zisetyenziselwa kwezinye izitshalo. I-phosphorus ebomvu nayo enye yeekhemikhali ezisetyenziselwa ukuveliswa ngokungekho mthethweni kwe-methamphetamines.
Ngokutsho kwiphando elipapashwe kwiNkcazo zeSizwe ze-Academy zeSayensi , i-phosphorus ingeniswe kuMhlaba ngama-meteorites. Ukukhululwa kweemveliso ze-phosphorus ezibonwe ekuqaleni kwimbali yomhlaba (kodwa kungekhona namhlanje) zinegalelo kwiimeko ezifunekayo kwimvelaphi yobomi. I-Phosphorus ininzi kwi-Earth crust kwi-concentration ye-1050 inxalenye yesigidi, ngesisindo.
Nangona ngokuqinisekileyo kunokwenzeka ukuhlukanisa i-phosphorus emthonjeni okanye emathambo, namhlanje isalathisi singabandakanywa kwiimaminerali ezithwala i-phosphate. I-Phosphorus ifumaneka kwi-calcium phosphate ngokutshisa idwala esithandweni sokunyusa umphunga we-tetraphosphorus. Umphunga uphelelwa kwi-phosphorus phantsi kwamanzi ukukhusela ukutshaya.
Uluhlu lweeNyoni zePolatom eziqhelekileyo
Yintoni ebalulekileyo kuMbala kwiTable Periodic?
Ulwimi lweeNtlanzi - uBetty Botter
Iimifanekiso zeMusic 12 zeMusic Country
Isilumkiso esinesiqhelo: Musa ukusela i-Bottled Waterft kwi-Car
Ukuchonga Indawo yokuhlala Yomtshato Emva kwe-Archeologically
Abasetyhini abaphezulu kwiMbali yeBhola yeBhola
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yeSingapore
Isikhokelo samaLebhu aLexical
Iingcambu zeNgqela okanye i-Servile Izimfa eItali
I-Prehistoric Snake Umfanekiso kunye neeprofayili
Yintoni iR Roller epheleleyo?
I-Emmett kwaze kwaba yilapho ibali lidlala indima ephambili kwi-Movement Rights Movement